Ithimba iphrojekthi yephrojekthi Imininingwane zobunjiniyela e Motor Better yasungulwa - China Shandong Better Motor
Ithimba iphrojekthi yephrojekthi Imininingwane zobunjiniyela e Motor Better yasungulwa
Ngo-June 26, neqembu elalenza lo msebenzi yephrojekthi Imininingwane zobunjiniyela e Motor Better yasungulwa. Shandong Sanjiang Electric Engineering Co., Ltd ophethe ukuklama futhi ezisebenza kule phrojekthi. It is kuhlelwe ukwenza ukusebenza Isivivinyo ekupheleni Sep. Manje Sanjing Electric Ubunginiyela ithimba wenza uphenyo eziyisisekelo.
Indima esasizibekele yona main saloluhlelo ukulandelela izinga ngokusebenzisa mes uhlelo. Ukuze kufezekiswe kufunwe abantu, umshini, impahla, umthetho.
Mes uhlelo ingafinyelela ukuphathwa elilungile ulwazi adlulisele ukubeka ukuze uqede imikhiqizo.
Creat uhlelo lokusebenza ocingweni, ukuze izintonga zokuphatha kungaba moniter isimo nokukhiqiza-noma kuphi nganoma yisiphi isikhathi ngokusebenzisa uhlelo lokusebenza.
Sizoqhubeka iphrojekthi ngokushesha ngangokunokwenzeka, ukwenza ngcono ukusebenza kahle ukukhiqiza kanye nekhono ukuncintisana.